Kutholwe umfana (15) enqunywe ikhanda eMlazi | Eyethu News
Kutholwe umfana (15) enqunywe ikhanda eMlazi
“Bamkhiphe ngaphansi kombhede ecashile.”
UMPHAKATHI waseMlazi kwa-F namanje usababaza isihluku sokubulawa komfanyana oneminyaka eli-15 ubudala isidumbu sakhe esitholwe sinqunywe ikhanda ngoLwesibili ekuseni.
UPhiwayinkosi Mhlongo ikhanda lakhe litholwe linamanxeba okudutshulwa ngasesikoleni iMbizweni High School umzimba wakhe wona watholwa ngasesikoleni iManyuswa Primary School.
Ngokusho kokukhulumela umndeni kamufi uNksz Siphiwe Mhlongo uthe umufi uthathwe abesilisa abayisithupha abephethe izibhamu ngezintathakusa zangawo uLwesibili, nathi amukhipha ecashe ngaphansi kombhede.
“Iyasithusa indlela abambulale ngayo ubhuti wami. Kufike labalisa behamba nabanye abangani bakhe bamuthatha bathi bamusa emaphoyiseni ngoba bethi ubulale omunye wabangani babo osghhaywe wabulawa umphkathi ngesonto eledlule,” kusho uNksz Mhlongo.
Leli phephandaba liphinde lahosha umoya wokuthi lomfanyana ubengomunye wabagangile kulendawo njengoba ngoMsombuluko kuthiwa kukhona umuntu amubambe inkunzi wase uyabaleka kanti uzobulawa ebusuku.
Ikhansela lakuWard 78 uMnuz Sithenjwa Nyawose lithe siyaqala ukwenzeka isihluku esinje endaweni ayiholayo, bashaqekile kakhulu njengomphakathi.
“Kumele siwancome amaphoyisa alusukumele lo ludaba ngokushesha, asebenza kanzima nangokuzimisela ngalesenzo,”kusho uMnuz Nyawose.
Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natali uKaputeni Nqobile Gwala ukuqinisekisile ukuthi ikhanda lomfana litholakale linenxeba lokudutshulwa.
“Abaseshi baseMlazi besizwa ngabo-Umlazi Crime Intelligence K9 Unit namaphoyisa omgwaqo babophe abasolwa abalone abaneminyaka eyi-18 neyi-19 abatholakale nezibhamu ezingekho emthethweni,”kusho uKaputeni Gwala.
Abasolwa bazovela enkantolo yaseMlazi ngoLwesine.
UNgqongqoshe uthi abasha abangafeli ngaphakathi